लाबारिश गर्ल– ६ - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ ८, शनिबार १७:०९
उसको यो दोस्रो प्रश्न मेरो कल्पना भन्दा धेरै बाहिरको कुरा थियो । जीवनमा पहिलो पटक देखेको कुनै अपरिचित युवती मेरो र वर्षाको सम्बन्ध बारे जानाकार थियो । उसले यी सबै कुराहरु कसरी थाहा पाई ? भन्ने प्रश्नले भन्दा पनि वर्षासँगको पछिल्लो सम्बन्ध र मेरो हालबारे थाहा पाएकी छे त ? भन्ने मनोभावले मलाई बेस्सरी थिच्यो । केहीबेर अघिको उसको प्रश्न “हजुरलाई वर्षा कत्तिको मन पर्छ ?” प्रतिको मेरो जवाफ “ठीकै” लाई उसले जति पढेकी थिई, त्यो भन्दा बढि उसले मेरो अनुहारलाई पढेकी थिई । कपट गरेर पीडा लुकाउने प्रयास हाम्रो मनले किन नगरोस् ? निष्कपटी त हाम्रो अनुहार छ, हाम्रो नयन छ । उसले मेरो अनुहार पढेरै जानेकी थिई, म कायल छु ।
सन्नाटाले धेरै अर्थ राख्छ, मेरो जीवनसँग पनि, मेरो परिस्थितीसँग पनि । वर्षा र म बिच झण्डै ५ महिनाको सन्नाटा थियो । त्यो सन्नाटाले मलाई कोलाहलभन्दा निकै पर लखेटेर एउटा बन्द कोठाको सन्नाटा प्रिय लाग्ने बनायो । आज वर्षासँग सम्बन्धित उसको एक प्रश्नले क्याफेमा पनि सन्नाटा छायो । बाहिर झरीको आवाज, सवारी साधनको आवाज, क्याफेभित्र गफमा तल्लिन केही मानिसहरुको आवाज, क्याफेको वुफरमा बजिरहेको मधुर हिन्दी गीतको आवाज, यि सबै कुराहरु कानमा ठोक्किरहेको त थियो तर मनले त्यसलाई महसुस गरेकै थिएन ।
उसले दोस्रो प्रश्न पछि पनि एकतमासले मलाई हेरिही । प्रश्न गर्दैगर्दा मेरो हातमाथि राखेका उसका दुवै हातहरु अझै पनि उस्तै अवस्थामा थिए । उदास मुद्रामा उसले मलाई जति हेरिरही, म उति लाचार महसुस गर्दै थिएँ । नयनले मलाई धोका दिदैँ थियो । सम्हालिन खोजेजस्तो गरि मैले झ्याल बाहिर नजर दौडाएँ । झरी परिरहेकै थियो । उसले केही लामो सास तानी, मलाई हौसला दिएजस्तो गरि दुवै हातले मेरो हातलाई केही जोडले कसी अनि आफ्नो हात मेरो हातबाट हटाएर आफ्नो कफीतिर बढाई । वरीपरीबाट ढाकिने गरि दुवै हातले कफीको कप समाएर दुवै कुइनाले टेबलमा टेकी, केही घोप्टो परेजस्तो गरेर कफीको एक चुस्की लिई अनि कफी कपलाई उसै गरि छोपेकै अवस्थामा मलाई पुलक्क हेरी । मेरो अनुहारमा जति उदासीपन थियो, त्यो उदासीपन उसको अनुहारमा पनि त्यति नै थियो । म केहीबेर उसलाई हेरेर घोप्टो परेँ अनि बल्ल उसको प्रश्नको जवाफ स्वरुप बोलेँ—“चाहत केही छैन जिन्दगीमा, बस् ! मन पर्ने चिजहरुलाई घृणा गर्न सक्ने बन्नु छ ।”
मेरो यो जवाफ पछि, फेरी पनि निकै बेरसम्म सन्नाटा छायो । मौन बसेरै हामीले कफीको चुस्की लिइरह्यौँ । न ऊ बोली, न म बोलेँ । कफीको अन्तिम चुस्की नसकिँदासम्म हामी मौनता मै बस्यौँ । यतिन्जेल मनमा अनेकौँ कुराहरु खेलिरहे । ऊसँग संवाद नभएको यो पाँच महिनासम्म ऊ कहाँ छे ? कस्तो अवस्थामा छे ? केही कुराको पनि जानकारी थिएन । यी सबै कुराहरु जान्न ऊसँग बोल्ने न मेरो हिम्मत थियो, न त उसको बारेमा बताउने अरु कोही थिए । बस्, जहाँ छे, जस्तो अवस्थमा छे, ऊ आफ्नो प्रिय मान्छेसँग खुसी छे, मलाई यही लागिरहेको थियो ।
उसको प्रश्नको जवाफमा ‘मन पर्ने चिजहरुलाई घृणा गर्न सक्ने बन्नु छ’ त भनेँ तर वर्षा मेरो लागि यस्तो चिज थिई, जसको लागि मेरो शब्दकोषमा घृणा भन्ने शब्द नै थिएन । पछिल्ला यी पाँच महिना मैले जतिसुकै कठोरताको साथमा बिताए पनि मलाई वर्षाको बारेमा जान्नु थियो । त्यतिखेर वर्षाको हालखबर बताउने एक मात्र पात्र खुसी थिई । मैले क्याफेको लामो मौनतालाई चिर्दै मेरो सम्मुख भएर दुःखी मुद्रामा बसेकी खुसीसामु एकपछि अर्को गर्दै दुई वटा प्रश्न राखेँ—“वर्षालाई तपाईँ कसरी चिन्नुहुन्छ ? उसलाई आजभोली कस्तो छ ?”
मेरो प्रश्न लगत्तै ऊ फेरी पनि मौन बसी र एकनासले झ्याल बाहिर हेरिरही । वर्षाको बारेमा केही त पक्कै भन्छे भन्ने प्रतिक्षाको भावले म उसलाई उसैगरी हेरिरहेँ । तर वर्षाको बारेमा जान्न प्रश्न गरेको मैले लगत्तै प्रतिप्रश्नको सामना गर्नुप¥यो । झ्यालबाट मतिर नजर मोड्दै उसले उल्टै सोधी—“कुरा गर्नुहुन्छ ऊसँग ?” मैले मुखलाई केही बाङ्गो पार्दै मुन्टो हल्लाएर ‘नाई’ को सङ्केत गरेँ अनि बोलेँ—“यस्तै ४÷५ महिना भयो नबोलेको ।” उसले तुरुन्तै प्रश्न गरी—“किन” ।
उसको यो पश्नपछि बेउत्तर त म पो भएँ । थाहा छैन, उसले वर्षासँगको मेरो पछिल्लो सम्बन्धबारे जानेर प्रश्न गरेकी थिई या नजानेर गरेकी थिई । तर यो प्रश्नले मलाई फेरी पनि घोँच्यो । वर्षासँग नबोलेर बिताएका यी कठोर महिनाका कठोर रातहरुले मलाई परिवार, आफन्त, साथीभाई, पढाइ अनि मेरो स्वास्थ्यदेखि मेरो भविष्यसम्मलाई कति टाढा धकेलिदिएको छ ? भन्ने कुरा उसलाई बताउनु थिएन मलाई । आफुले मायाँ गरेको मान्छे अरु कसैको सङ्गतमा छे भन्ने कुराले कति पीडा दिन्छ ? भन्ने कुरा उसलाई बताउनु थिएन मलाई । तर पनि मुखबाट बोली फुटिहाल्यो—“मसँग बोल्नैपर्ने उसको आदत थिएन, उसलाई बोलाउन सक्ने मेरो तागत थिएन ।”
मेरो यो जवाफपछि उसले अर्को प्रश्न गरिन । हामी एकछिन मौन बस्यौँ । उसले वर्षाको बारेमा केही भन्छे की भन्ने भावले मैले उसलाई हेरिरहेँ । तर ऊ केही बोलिन । जब मैले उसलाई वर्षाको बारेमा दोस्रो पटक सोध्नै लागेको थिएँ, उसले हातको घडि हेरेर छुट्टिने कुरा गरी । कफीको बिल आफैले तिरी । ऊ अघि अघि, म पछि पछि क्याफेबाट निस्कियौँ । बाहिर पानी पर्न बन्द भइसकेको थियो । उसले मलाई डेरासम्म पु¥याइदिने कुरा गरी । तर मैले आफू ट्याक्सी या माइक्रो जे पाइन्छ, त्यसैमा जाने कुरा गरेँ । हामी केहीबेर सडक किनार नजिकै उभिएर बस्यौँ । मैले एउटा ट्याक्सी रोकेँ अनि ट्याक्सी भित्र बसेँ । ट्याक्सीले गति के लिदैँ थियो, ऊ झ्याल नजिकै आएर मतिर हेरेर बोली—“तपाईँले उसलाई एकपटक म्यासेज गरेर हेर्नुपर्छ ।”
यति बोलेर ऊ आफ्नो स्कुटरतिर लागी । उसको यो वाक्य मलाई वर्षाको बारेमा जान्न पर्याप्त थिएन । जसरी उसले वर्षाको बारेमा केही भन्नुको साटो उसलाई म्यासेज गर्न अनुरोध गरेकी थिई, यसको रहस्य र मतलवसँग पनि म अनविज्ञ थिएँ । उसको अनुरोधलाई मैले फरक फरक तरिकाबाट अड्कलबाजी लगाएँ । क्याफेमा बसुन्जेलसम्म म जति उदास थिएँ, ऊ पनि उत्तिकै उदास थिई । कोही अपरिचित मानिसको प्रेम सम्बन्धमा आएको दरारलाई लिएर ऊ उदास हुनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । ऊ उदास थिई त केवल वर्षाको लागि थिई । मैले यसरी पनि अड्कल लगाएँ । ट्याक्सी डेरा नजिकै नपुगुन्जेलसम्म मनमा यि यस्तै कुराहरुले दिमाग घुमिरह्यो । मलाई लाग्दै थियो, वर्षामा पनि ममा जस्तै केही कठिन कुराहरु भइरहेका छन् ।
ट्याक्सीबाट ओर्लेर केही फलफुल किनेँ अनि सरासर कोठामा पुगेँ । औषधीको पोलिथिन टेबलमा राखेँ । शरीरको कपडा चेन्ज गरेँ । रगत लागेकाले धुनलाई वाथरुम गएर सर्फमा भिजाएर रुममा फर्किएँ । मोबाइललाई चार्जमा जोडेँ । कोठा निकै फोहोर भएको थियो । पछिल्ला महिनाहरुको खराब आदतले ममा सरसफाइको वास्तै थिएन । चुरोटको बट्टा टेबलमुनि छरपस्त थिए । खातमुनि रक्सीका रित्ता बोतलहरु थिए । मलाई यो देखेर आफुप्रति निकै घृणा जागेर आयो । मेरो खराब आदतले मलाई सबैतिरबाट हानिरहेको थियो । यो मैले बल्ल बुझेँ । टाउको दुखिरहेकै भएपनि मैले कोठा सफा गरेँ । कपडाहरु मिलाएँ । टेबलका किताबहरु ठीक ठीक ठाउँमा मिलाएर राखेँ । यि सबै कामहरु गरिरहँदा हिजो भट्टिदेखि अहिले कोठासम्मका कुराहरुले भन्दा पनि वर्षालाई केही त भइरहेको छ भन्ने त्रासले सताइरह्यो ।
भिजाएका कपडाहरु धुम कि नुधुमको दोधारमा केहीबेर अल्झिएँ । टाउकोको चोटले अस्वस्थ महसुस भइरहेको थियो । त्यसैले कपडा धुने कामलाई थाँती राखेर खातमा बसी भित्तातिर अडेस लगाएँ अनि फेसबुक खोलेँ । केहीबेर अघि छुट्टिने बेलामा खुसीले भनेकी थिई कि मैले वर्षालाई म्यासेज गरेर हेर्नुपर्छ । उसको भनाईको तात्पर्य के थियो ? मैले बुझिन तर मैले वर्षाको प्रोफाइल खोलेर हेरेँ । उसले अझै पनि त्यो केटासँगको युगल प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गरेकी थिइन । मैले उसको प्रोफाइल तस्बिर मुनिको म्यासेजमा क्लिक गरेँ । म्यासेज बक्समा टाइपिङ्को लागि कर्सर ब्लिङ्क गरिरहेको थियो, तर यता मेरो धड्कन कर्सर भन्दा तिव्र गतिमा उफ्रिरहेको थियो ।
उसलाई म्यासेज लेख्नको लागि गरेको यो मेरो प्रयास पाँच महिना यताको पहिलो प्रयास थियो । तर आजको यो मेरो प्रयास हिम्मत भन्दा पनि आज खुसीले दिएको उत्सुकताको उपज थियो । यसै त मलाई खुसीले वर्षाको बारेमा केही नबताएर रहस्यको भुमरीमा हुत्याइदिएकि थिई, त्यसैमाथि मलाई म्यासेज गर्नै परे के लेखेर म्यासेज गर्ने भन्ने अन्योलताले पिरोल्न थाल्यो । केहीबेरको अन्योलतापछि मैले लेखेँ—“हाई, के छ खबर ? सञ्चै छौँ ?”
यति म्यासेज लेखेर पनि मलाई पठाउने हिम्मत भने जुटेन । एक मनले भनिरहेको थियो, ‘ऊ अरुसँगै रमाएकी छे भने तेरो एक म्यासेजले पनि उसको खुसी टुट्न सक्छ, त्यसैले म्यासेज गर्नु व्यर्थ छ ।’ फेरी अर्को मनले भनिरहेको थियो, ‘आज खुसीले गरेको अस्पष्ट र रहस्यमय कुरा अनुसार वर्षा भित्र पनि केही वेठीक त पक्कै भइरहेको छ, उसको बारेमा जान्न जरुरी छ ।’ पठाउँ कि नपठाउँको यो मनोद्वण्द्व केहीबेर चलिरह्यो । यहि मनोद्वण्द्वको बिचमा मेरो मोबाइलमा भिडियो कलको घण्टि बज्यो । त्यो कल थियो मेरो मिल्ने साथी, विश्वासबाट ।
विश्वास फ्रान्समा थियो । ऊ फ्रान्स पुगेको केही महिनासम्म त कम्तीमा पनि हप्तामा एक पटक हाम्रो कुरा हुने गर्दथ्यो । तर जब पछिल्ला महिनाहरु मैले खराब परिस्थितीहरुबाट व्यतित गर्नुप¥यो, उसको र मेरो बिचमा कुरा भएको थिएन । उसको र मेरो बिच मात्र होइन, मैले कुनै पनि साथीहरुसँग कुरा गरेको थिएन । धेरै साथीहरुले मलाई फोन, म्यासेजबाट सम्झिन्थे तर मैले कसैलाई पनि राम्ररी रेन्पोन्स दिएको थिएन । ती सबै साथीहरुले भन्दा वढी मलाई कसैले सम्झिन्थ्यो त, त्यो विश्वास नै थियो । तर मैले उसलाई पनि वेवास्ता गरेको थिएँ । यतिखेर उसको नामले मेरो फोनमा भिडियो कलिङ देखाउँदा मलाई यो कुराले झन बढी आत्मग्लानी भयो । भिडियो कलमा उसले मेरो टाउकोको चोट नदेखोस भनेर ज्याकेटको टोपी लगाएँ अनि उसको कल रिसभ गरेँ ।
भिडियो कलमा विश्वास कालो धर्सा गरेको सेतो हाफ टि—शर्ट लगाएर कुनै एक समुन्द्री किनारमा देखियो । अनन्त जस्तै देखिने निलो समुद्र अघि उभिएर उसले ‘हाई, के छ ?’ भनेर हात हल्यायो । उसको आँखामा सन ग्लास थियो भने हावाले उसको कपाललाई बिगारेर गुजुल्ट्याइदिएको थियो । मैले ज्याकेटको टोपीलाई अझै निधारतिर तानेँ अनि बोलेँ—“ठीक छ यार, तेरो के छ ?” उसले मेरो जवाफको उत्तर गाली गरेर दियो—“के भाको छ हँ तँलाई ? न फोन रिसिभ गर्छ ? न म्यासेजको रिप्लाई दिन्छ ? केटाहरुलाई सोधेको क्याम्पस नि आउँदैन भन्छन् त ? ……..” ऊ एकछिन सम्म एकहोरो बोलिरह्यो । मैले उसलाई हेरेर उसको कुरा सुनिरहेँ । ऊ चुप लागेपछि मैले बल्ल बोलेँ—“सरी यार । चिनेको छस् त, म यस्तै छु भनेर ।”
मैले उसलाई फ्रान्स बसाईको बारेमा सोधेँ । पहिलेको काम छोडेर अहिले रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने गरेको कुरा बतायो । म बोलिहँदा मेरो चोट नदेखोस् भनेर बेलाबेलामा टोपी तानिरहेँ । तर अश्चानक उसले सोध्यो—“ओई, के भयो टाउकोमा ? किन पट्टी बाँधेको ?” मैले ढोकामा ठोक्किएर सानो चोट मात्र लागेको भनेर ढाँटे । तर उसले मलाई पुरै टाउको देखाउन कर ग¥यो । अन्तत ः मैले टोपी खोलेर मेरो चोट देखाएँ ।
अन्ततः मैले चोट लाग्नुको सबै कारण बताएँ । त्यती मात्र होइन पछिल्ला पाँच महिनामा म भित्र के भइरहेको छ ? भनेर पनि बेलिविस्तार लगाएँ । वर्षासँगको भेट, वर्षासँगको चिनजान र ऊसँगको मेरो सम्बन्धको बारेमा पनि मैले उसलाई भनेँ । उसले मेरा कुराहरु बुढापाकाले भनेको कथा बालबच्चाले सुने जसरी सुनिरह्यो । विश्वास नै मेरो पहिलो साथी थियो, जसलाई मैले मेरो हालत, मेरो पागलपन अनि मेरो उदासीपनलाई मन खोलेर शेयर गरिरहेको थिएँ । मैले यो कुराहरु बताइरहँदा एक एक गरेर मनका बोझहरु हटिरहेको भान भइरहेको थियो । यसले मन हल्का भयो, म आफुलाई फ्रेस महसुस गरेँ ।
मेरो प्रेमकथा सुनिसके पछि उसले मलाई धेरैबेर सम्झायो । उसले मलाई प्रेम, भविष्य र जीवनको बारेमा धेरै उदाहरणहरु दिएर हौसला दियो । दुरीका हिसाबले विश्वास मदेखि निकै टाढा थियो, तर आज ऊ मेरो सामुन्ने नै छ भन्ने आभास भइरहेको थियो । उसले मलाई अङ्गालो हालेर, मेरो ढाडमा थप्थपाएर, मेरो कानमा फुस्फुसाएर यि कुराहरु भनिरहेको छ जस्तो लागिरहेको थियो । यि पछिल्ला कठोर महिनाहरुले मलाई उज्यालो, भिड र आफ्नाहरुसँग डराउने बनाइसेको थियो, तर आज उसले मलाई हौसलाको उज्यालो बालेर अपरिचित भिडहरुमा पनि आफ्नाहरु चिन्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान दिएको थियो ।
वर्षाको लागि म पछिल्लो पटक उसले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गरेपछि मैले आफ्नो फेसबुकको बायो चेन्ज गर्दा रोएको थिएँ । त्यसपछिका यि पाँच महिना उसका यादहरुले चिथोरिरह्यो, म डिप्रेसनमा पनि गएँ, नसामा पनि डुबेँ तर साँच्चिकै भन्नुपर्दा उसको लागि कहिल्यै रोएन । तर आज विश्वासले मलाई सम्झाइरहँदा म रोएँ । सायद हामीलाई सबैभन्दा प्यारो भावनाको सागर लाग्छ । आफ्नो को नै छ र ? भन्ने भावनाले हामी जति रुन्छौँ नि त्यो भन्दा धेरै कोही आफ्नो बनेर सम्झाउँदा रुन्छौँ । यो पाँच महिनाको कठोर दिनहरुको माझ विश्वास मेरो लागि आफ्नो बनेर आएको थियो, त्यसैले त म रोएँ ।
विश्वास र म करिब आधा घण्टा जति भिडियो कलमा बोल्यौँ । फेरी कुरा गर्ने बाचा सहित ऊ बिदा भयो । महिनौ पछि कसैसँग मन खोलेर लामो समयसम्म आज कुरा गरेको थिएँ । ऊ मसँग बिदा भइसकेपछि पनि मलाई उसले भनेका कुराहरुले प्राण दिइरहे । मेरा नयन अझै पनि भिजेकै थियो तर उसको सामु किन रोएँ भनेर कत्ति पनि लज्जाबोध भएको थिएन । उसले भिडियो कलको अन्त्य गर्नुअघि भनेको थियो—“पानी होस् या कसैको याद, सङ्लिनको लागि बग्नै पर्छ ।”
विश्वाससँग बिदा भएपछि म म्यासेन्जरमा पुनः फर्किएँ । वर्षालाई पठाउन भनेर लेखेको म्यासेज हटाएँ । केही साथीहरुको फोटोहरुमा लाइक, कमेन्ट गरेँ । यो पनि मेरो नयाँ काम थियो । फेसबुक हरपल चलाइरहे पनि अरुको फोटो र स्टाटसमा मैले रियाक्ट गर्न बिर्सिसकेको थिएँ । साथीहरुले धेरै पहिलेदेखि पठाएका म्यासेज सम्म हेरेको थिइन । उनीहरुलाई रिप्लाई दिएँ । अनलाइन भएका साथीहरुसँग मज्जाले कुरा गरेँ । फेसबुकबाट अफलाइन भएपछि घरतिर फोन घुमाए । लामो समय भएको थियो, आमासँग दिल खोलेर कुरा नगरेको । आफैले गाउँको हालखबर सोध्नुको साटो गाउँबाट फोन आउँदा पनि म राम्रोसँग आमासँग बोलेको थिएन । तर आज करिब २० मिनेट जति आमासँग बोलेँ । मन झनै हलुङ्गो भयो ।
टाउकोको चोट निको नहुन्जेलसम्म करिब १५ दिन जति म कोठा मै बसेँ । तर यो बिचमा म सबै साथीहरुसँग बोलेँ । बेला बेलामा साथीहरु कोठा मै भेट्न आए । यसले साथीको महत्व मलाई राम्ररी सिकायो । वर्षाको याद आउँदै नआउने होइन, तर उसको यादले मलाई पहिले जति पीडा दिन्थ्यो, त्यो पीडाको महसुस निकै कम हुन थाल्यो । कुनै समय उसको प्रोफाइल खोलेर हेनै पर्ने बानी परेको थियो, त्यो पनि हटाइदिएँ । निको भएपछि क्याम्पस जान थालेँ । कोर्स निकै अघि बढिसकेको थियो । साथीहरुबाट नोट मागेर मैले पनि नोट बनाउन थालेँ । रिफ्रेसको लागि केटाहरुसँग बेलुकीतिर मन लागेको ठाउँतिर टहलिन थालेँ । यि यस्ता कुराहरुले म छोटो समय मै पुरै त होइन, तर केही हदसम्म भएपनि सामान्य जीवनमा फर्किन थालेँ ।
एक बिहान म खाना तयार गर्दै थिएँ । राइस कुकरमा भात र प्रेस कुकरमा दाल पाक्दै थियो । मोबाइलमा गीत बजाएर सिमी केलाउँदै थिएँ । गीत बज्दै गरेको मोबाइलमा रिङ्टोन बज्यो । मोबाइल हातमा लिएर हेरेँ, फोन अपरिचित नम्बरबाट थियो । मैले फोन रिसिभ गरेँ । उताबाट केटीको आवाज कानमा ठोक्कियो—“सञ्चै हुनुहुन्छ ?” मैले आफु सञ्चै भएको कुरा बताएँ । उसले मेरो टाउकोको चोटको बारेमा सोधी । मैले घाउ पनि लगभग ठीक भएको कुरा बताएँ । उसले ४÷५ वटा सवाल यसरी नै सोधी, तर नचिनेरै मैले उत्तर दिएँ मात्र । मैले उत्तर दिइरहँदा मनमा को होली ? भन्ने जिज्ञासा पनि चलिरहेको थियो । मेरो टाउकोको चोटको बारेमा पनि थाहा पाएकी, कतै खुसी त हैन ? भन्ने अड्कल काट्दै थिएँ, उताबाट आफै बोली—“चिन्नुभएन ? म खुसी ।”
उसको यो वाक्यले मलाई फेरी जिज्ञासाको भुमरीमा फसाइदियो । महेन्द्रपुलमा छुट्टिने बेलामा उसले मलाई वर्षालाई म्यासेज गर्न अनुरोध गरेकी थिई । तर मैले गरेको थिइन । त्यसपछिका मेरा दिनहरु भिन्न तरिकाले बित्न थालिसकेका थिए । भनौँ न, म धेरै हदसम्म नर्मल लाइफमा फर्किसकेको थिएँ । उसलाई मैले म्यासेज गर्नु जरुरी देख्नै छोडिसकेको थिएँ । उसले मलाई किन फोन गरी ? भन्ने जिज्ञासा कै बिचमा बल्ल म बोलेँ—“ए, चिनेँ । हजुरलाई कस्तो छ नि ?” उसले आफु पनि ठीक भएको कुरा बताई । तर उसले मलाई फोन गर्नुको उद्देश्यबारे केही भनिन ।
हामी बिचमा केही सामान्य कुराहरु भएपछि मैले उसलाई फोन गर्नुको उद्देश्यबारे सोधेँ । फोन गर्नुको उद्देश्य स्वरुप उसले मलाई वर्षासँगको सम्बन्धको बारेमा भन्न अनुरोध गरी । मलाई उसको अनुरोधले पोलिरहेको थियो । मलाई फेरी पनि विगतका कुराहरु कोट्याइरहँदा कति गाह्रो होला भन्ने महसुस उसले गरेकै थिइन सायद उसले मलाई कर गरिरही । मलाई ऊसँग रिस पनि उठीरहेको थियो । मैले नकारीरहेँ, उसले लगातार उसै गरी कर गरिरही । अब त मैले आफुलाई कन्ट्रोल गर्नै सकेन, अनि उसलाई केही जोडले कराएँ—“ऊसँगको सम्बन्धप्रति अरुलाई किन मतलब ? प्लीज, म उसलाई बिर्सन खोजिरहेको छु, म चाहान्छु कि यो टपिकमा कसैले पनि मसँग कुरा नगरोस्, ……प्लीज ! ”
मैले यति भनिसके पछि केही बेर ऊ चुप लागी । मलाई चर्को आवाज गरेकोमा पछुतो लाग्दै थियो । अनि मैले उसलाई माफी मागेँ । “अरुलाई मतलव छ या छैन ? तर मलाई मतलव छ, सजल ।”, ऊ नरम भएर बोली । उसले अझै थपी—“तपाईँ र उसको सम्बन्धको बारेमा मलाई सबै कुरा त थाहा छैन, तर यति थाहा छ, तिन अक्षरको नाम ‘सजल’……वर्षाको लागि एक प्रिय नाम थियो ।”
यति भनेर उसले फोन काटी । म भित्रैदेखि अनेकौँ संवेदनाहरुले भरिएर आएँ । खुसीले भर्खरै भनेका अन्तिम शब्दहरु र वर्षाले मलाई गरेको वेवास्तालाई संवेगको तराजुमा जोखेर हेरेँ । संवेगको तराजु सन्तुलन गुमाए जसरी तलमाथि गरिरह्यो । निकै बेरसम्म पनि मैले वर्षा र मेरो सम्बन्धको वास्तविक तौल पत्ता लगाउन सकेन । अव त मलाई मनैदेखि जान्न मन लाग्यो, कि वर्षा कहाँ छे ? कस्तो अवस्थामा छे ? जान्नु थियो त अब खुसीबाट । मैले खुसीलाई तत्कालै कलव्याक गरेँ तर उसले रिसिभ गरिन । मैले अरु तिन पटक फोन हानेँ, उसले अझै पनि रिसिभ गरिन । बरु उसको नम्बरले मेरो मोबाइलमा म्यासेजको घण्टि बजायो । जब म्यासेज खोलेर हेरेँ, अनायासै नयन भरिएर आयो । म्यासेज नेपालीमा लेखिएको थियो—‘सजल……..म वर्षा । जसरी मेरो नाम आफै पत्ता लगाएका थियौ, त्यसरी नै मेरो पीडा पनि पत्ता लगाइदेउ न है ?
बुर्तिबाङमा संक्रमितहरु आइसोलेट नभएको प्रति स्थानीयको चासो